Izindatshana zikaMukund Krishna ku Martech Zone |
Imibhalo nge UMukund Krishna
UMukund ubone ukuthi ukumaketha kwe-Advocacy, igama elisha nomqondo omusha, kunanela kusizinda sokumaketha esiveza umqondo wokwakha abameli bezimpawu zokuletha ukufinyeleleka okungokwemvelo kokuqukethwe komkhiqizo ngeziteshi zokuxhumana zenhlalo. Ngalo mqondo engqondweni, uMukund wasungula SOCXO futhi safaka umqondo wokwakha ipulatifomu yewebhu elula kodwa enamandla nomkhiqizo weselula onophawu lwamabhizinisi ukuze ama-Enterprises axhume futhi asebenzise ibutho lawo labasebenzi, ophathina namakhasimende abo ukuba babe ngabasekeli bezimpawu zomkhiqizo nabathonya abancane ezinkundleni zokuxhumana.
I-SOCXO: Ukumaketha Kokumela ngamanani entengo yokusebenza
NgoLwesibili, ngoFebhuwari 20, i-2018 NgoMsombuluko, Februwari 19, 2018 UMukund Krishna
Njengengxenye yesimo sokumaketha kokuqukethwe, ukumakethwa kwedijithali kuze kube manje kube yindlela ekhethwayo yokuthi amaBrands afinyelele futhi ahlanganyele ababukeli bawo ku-inthanethi. Imodeli ejwayelekile ye-Digital Marketing iqukethe inhlanganisela ye-imeyili, i-Search kanye ne-Social Media Marketing futhi kuze kube manje isebenzise indlela yefomula futhi ekhokhelwayo ukudala nokusabalalisa okuqukethwe komkhiqizo online. Kodwa-ke, kube nezinselelo nezinkulumompikiswano ngecebo, ukukala, imiphumela kanye ne-ROI yabezindaba abakhokhelwayo